Monaco Hurumende Yevashanyi Chiremera chinogamuchira Mutungamiriri mutsva uye Mutevedzeri Director
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Monaco Hurumende Yevashanyi Chiremera chinogamuchira Mutungamiriri mutsva uye Mutevedzeri Director
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Chikwata chitsva chakagadzwa, semusoro weMonaco Government Tourist & Convention Authority. Mr. Guy Antognelli, aimbova Mutevedzeri Director anova Mutungamiriri mutsva weMonaco Tourism naMai Sandrine Camia, vanga vachishanda semukuru weMonaco Convention Bureau kwemakore manomwe apfuura, vanova Mutevedzeri weMutungamiriri.
Mai Camia vane ruzivo rwakasimba mukushanya; anga achishanda kwemakore makumi maviri emabhizimusi emahotera emhando yepamusoro anosanganisira Hotera Lutetia muParis uye Hotera Martinez muCannes, izvo zvaive zviri zviviri zvemhuri yeTaittinger Mhuri. Akabata chinzvimbo cheMutungamiriri weZvekutengesa, Kushambadzira uye Kutaurirana kune maviri akazvimirira emahotera emahotera, Hotel Royal Riviera muSaint-Jean Cap-Ferrat uye Hotera Metropole Monte-Carlo. Muna 20, akagadzwa kuve mukuru weMonaco Convention Bureau uye anga achitungamira kusimudzira nekusimudzira kweMICE, uku achishandisa maturusi matsva ekutaurirana nekutengesa uye nekuona kuvimbika kwevatengi vakanakisa.
Mai Camia nezve kugadzwa kwavo seMutevedzeri Wedhairekitori: ”Iri idambudziko nyowani nekucherechedzwa kwebasa rakaitwa kuConstitution Bureau. Makore manomwe apfuura aya ave akapfuma mune zvakaitika uye nekubudirira. ”
Mushure mekupedza kudzidza muEnjiniya Yezvemari paNice-Sophia-Antipolis University, VaAntognelli vakatanga basa ravo mune yeMonegasque subsidiary yebhanga reSwitzerland rakazvimirira, kutanga muhofisi yekumashure uye mune manejimendi manejimendi.
Munguva yemakore gumi akatevera, iye akabatsira mukuvandudzwa kwekambani yeinishuwarenzi muMonaco, manejimendi ekupedzisira emashandisirwo evatengi achishandisa hunyanzvi hwezvemari pamwe nehunyanzvi hwehukama.
Muna 2011, akagadzwa kuve Mutungamiriri weDhipatimendi reDhipatimendi reMonaco Hurumende Yekushanya & Kokorodzano Chiremera. Akabatsira mukuvandudzwa kwebasa iri uye akawedzera munda wake wezvekuita kuhungwaru uye kukwikwidza njere.
Muna 2015 akatora chinzvimbo cheMutevedzeri Womutungamiriri uye akashanda mukubatana kwakapfigwa nemasevhisi ese ekusimudzira nekusimudzira kushanya muhukuru.
Mr. Antognelli nezve kugadzwa kwavo seMutungamiriri: Kusarudzwa uku kucherechedzwa kwebasa rangu uye chirevo chekuvimba kubva kuHurumende. Ini ndinotarisira zvikuru kushanda pamwe nechikwata chakazvipira kusimudzira kuenda uye chakawana mibairo mikuru mumakore apfuura.
Chinangwa changu ndechekutungamira mishoni dzese dzeMonaco Hurumende Yevashanyi & Musangano Wechibvumirano kuona huwandu hwekushanya gore rese uye nekuwedzera zvakanakira hupfumi kunzvimbo yekuenda.
Isu tanga tichigara tichishanda padhuze nevose vatinoshanda navo muchikamu chekushanya kwePrincipality.
"Tinofanira kuendesa maturusi matsva mukati megadziriro yakatsanangurwa yekusimudzira kwairi kuenda, kuti tigadzirise mhedzisiro yekushanya muPrincipal."